Julie's Golden Crackers 125g (10 Pcs) ~ ICT.com.mm
HomeJulie's Golden Crackers 125g (10 Pcs)
Julie's Golden Crackers 125g (10 Pcs)
Brand: Julie’s Item: Golden Crackers Contains cereals containing gluten and milk derivatives. Processed inafacility that also processes soya derivatives, sesame, peanut, tree nuts and nut products. Net Weight: 125g မှတ်ချက်။... [Learn more]
Item: Golden Crackers
မှတ်ချက်။ ။ Julie’s Golden Crackers 125g (၁၀) ထုပ် ပါ၀င်သည်။
Julie’s တံဆိပ် Golden Crackers က ဘယ်တော့မှ ရိုးမသွားမဲ့ Cracker ဘီစကစ်ဖြစ်ပြီး ကော်ဖီပူပူလေးနဲ့ တွဲဖက်သုံးဆောင်ဖို့ အကောင်းဆုံးမုန့်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မုန့်ထုပ်ကိုဖောက်လိုက်တာနဲ့ လတ်ဆတ်တဲ့ဂျုံနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ သင်းပျံ့တဲ့မွှေးရနံ့ကို ရရှိမှာဖြစ်ပြီး ရွှေအိုရောင်အသွင်အပြင်နဲ့ ကြွပ်ဆတ်တဲ့ မုန့်အရသာက စားပြီးရင်း စားလို့ကောင်းနေစေမှာပါ။ လှပသပ်ရပ်တဲ့ထုပ်ပိုးမှုနဲ့အတူ အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး အလွယ်တကူ သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ အခြားပါဝင်ပစ္စည်းအဖြစ် ကစီဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ကောက်ပဲသီးနှံတွေနဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားပါတယ်။ Julie’s Golden Crackers 125g အထုပ် စုစုပေါင်း (၁၀) ထုပ် ပါ၀င်ပါတယ်။